Carlsberg Myanmar Export Beer to China for the First Time | Myanmar Business Today
HomeBusinessCarlsberg Myanmar Export Beer to China for the First Time
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်၇ှုနိုင်ပါသည်။
Carlsberg Myanmar announced on September 18 that it has exported 36 million units of 330 ml cans (12,000 hectoliters) of leading beer brand, Tuborg – to Carlsberg China. The news marks the company’s first export of the brand to China,amove made in response to increasing demand for Tuborg in the Chinese market.
“We are very excited that Carlsberg is not only able to brew and sell quality beers in Myanmar, but now also to international consumers”, said Mr Vaibhav Khedkar, Supply Chain Director at Carlsberg Myanmar.
“This export has proven our team’s capabilities when working toavery tight schedule with the order successfully delivered by truck to China within just 10 weeks. This tight turnaround happened despite the export having to go through procedures, from adjusting the formula to match the taste of Chinese consumers and ordering cans to making sure export licenses and Myanmar FDA approval were in place. We are extremely proud for the achievement of our team on behalf of all Myanmar”, added Khedkar.
Notably, with beer smuggling and illicit tradeaproblem in Myanmar, Carlsberg Myanmar’s export of Tuborg to China is an important step forward in bringing about positive change for the beer industry in Myanmar.
According to research firm Euromonitor International, 30 percent of all beer consumed in Myanmar in 2016 was illicit trade resulting inaUS$ 50 million tax revenue loss for the country. Beer smuggling results in large quantities of beer and liquor being smuggled across borders and openly sold throughout the country. In addition to tax revenue losses, the issue causesalot of problems such as health safety issues and also undermines local businesses,achallenge to law and order enforcement.
Carlsberg Myanmar’s export to China has helped the company contributeasignificant sum of taxes to the Myanmar Government asaresult of legal cross-border trade. The company is an active member of Eurocham Myanmar and supports the organizations efforts to raise awareness of illicit trade issues.
To-date, Carlsberg has invested over US$ 110 million in Myanmar. The company employs more than 750 people in the country, 99% of which are Myanmar nationals. Last year, Carlsberg contributed MMK 25.8 billion in taxes and has been regarded asatop taxpayer in the country in terms of Special Goods Tax and Commercial Tax. The company has also been nationally recognized asaleading employer with five of Myanmar’s best employer awards in 2019.
Carlsberg Myanmar က ၎င်း၏နာမည်ကျော် ဘီယာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် Tuborg ၏ ၃၃၀ မီလီလီတာဝင် ဘီယာဘူးပေါင်း ၃၆ သန်း (၁၂,၀၀၀ ဟက်တိုလီတာ) ကို Carlsberg China သို့ တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဤသည်မှာ တရုတ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွင်း Tuborg ဘီယာ၏ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း Carlsberg မြန်မာက Tuborg အမှတ်တံဆိပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တင်ပို့လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
“Carlsberg အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရည်အသွေးမြင့်ဘီယာတွေ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ပြီး ရောင်းချနိုင်ရုံတင်မက အခုဆို နိုင်ငံတကာ က သောက်သုံးသူတွေအတွက်ပါ ရောင်းချပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်” ဟု Carlsberg မြန်မာ၏ Supply Chain ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Vaibhav Khedkar က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေ ကြပ်နေတဲ့အထဲမှာမှ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့စွမ်းရည်ကို ဒီတင်ပို့မှုက သက်သေခံနေပါတယ်။ အခုအော်ဒါကို သီတင်းပတ် (၁၀) ပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံအရောက် ထရပ်ကားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အောင်အောင်မြင်မြင် ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံက သောက်သုံးသူတွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီအောင် ဖျော်စပ်ပုံ ပြောင်းလဲရတာကစလို့ ဘူးခွံမှာယူတာ၊ ပို့ကုန်လိုင်စင်နဲ့ မြန်မာအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန (FDA) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရတာတွေအထိ ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် အချိန်မီ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအတွက်လည်း မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့အရမ်းဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါတယ်” ဟု Mr. Khedkarr က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဘီယာမှောင်ခိုပို့ခြင်း၊ တရားမဝင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း စသည့်ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားနေသည့်အချိန်တွင် Carlsberg မြန်မာက Tuborg ဘီယာကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ယခုလိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘီယာစျေးကွက်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေမည့် အရေးကြီးခြေလှမ်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Euromonitor International ၏ လေ့လာချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝယ်ယူသောက်သုံးသည့် ဘီယာအားလုံး၏ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားထားြခင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အတွက် အခွန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၅၀) ဆုံးရှုံးနစ်နာစေခဲ့ပါသည်။ တရားမဝင် ဘီယာတင်ပို့ခြင်းမှ ဘီယာနှင့် အဖျော် ယမကာ ပမာဏအမြောက်အမြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တင်ပို့ကာ နိုင်ငံအနှံ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း ခံနေရပါသည်။ နိုင်ငံတော် အတွက် အခွန်ငွေဆုံးရှုံးခြင်းသာမက ကျန်းမာဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာပြဿနာ၊ အခြားပြဿနာများစွာ ဖြစ်ပွားစေသည့်အပြင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်စေကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်နေပါသည်။
ယခု Carlsberg မြန်မာက တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက် အခွန်ငွေပမာဏအမြောက်အမြား ပေးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Carlsberg မြန်မာသည် Eurocham မြန်မာ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် တရားမဝင်ကုန်သွယ်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော အသိအမြင်မြှင့်တင်ပေးရန် Eurocham မြန်မာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်လည်း ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။
ယနေ့အချိန်အထိ Carlsberg သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၁၁၀) ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝန်ထမ်းပေါင်း (၇၅၀) ကျော်ကို ခန့်အပ်ထားပြီး ဝန်ထမ်းအင်အား၏ (၉၉) ရာခိုင်နှုန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယမန်နှစ်က Carlsberg သည် အခွန်ငွေ မြန်မာကျပ် ၂၅.၈ ဘီယီယံကို ပေးဆောင်ခဲ့ကာ နိုင်ငံတွင်း အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်ဆုများအနက် (၅) ဆုကို ဆွတ်ခူးပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Previous articleDai-ichi Ready to Deliver its “Peace of Mind” Propositions to Myanmar
Next articleWill COVID-19 be the catalyst that kills foreign investment in Myanmar?